Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka Somalia oo soo bandhigtay waxqabadkii 2014 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Muqdisho, 11 Febraayo 2015: Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ayaa waxa ay soo bandhigtay Barnaamij ay uga warrameyso waxqabadkeedii sanadkii 2014. Munaasabadan oo si heersare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu qabtay huteelka SYL waxaana kasoo qaybgalay Xildhibaanno, xubno ka socda Golaha Wasiiradda, Ganacsato, Ururada Bulshada Rayidka ah iyo shaqaalaha Wasaaradda.
Waxaa goobta lagu soo bandhigay 6 buug oo ka turjumaya hawlihii u qabsoomay Wasaaradda ee 12kii bilood ee lasoo dhaafay sida waxqabadka sanadka, habraaca maaliyadda, xilalka iyo waajibaadka wasaaradda, buug ka sheekeynaya xogta macdanta dalka iyo kuwa kale oo si fahafaahan uga sheekeynaya halka Wasaaaraddu kasoo dhaqaaqday iyo meesha ay maanta taagantahay.
Xaaji Cumar Carrabeey oo ku hadlayay magaca ganacsatada Shidaalka ayaa sheegay in ay wada shaqeyn wanaagsan oo ku saleysan wadatashi iyo iskawarqab joogta ah ay dhexmartay ganacsatada Shidaalka iyo Wasaaradda isaga oo sheegay inay sii xoojin doonaan wadashaqeynta mar walba ay Wasaaradda la leeyihiin. Xaajiga wuxuu ballan qaaday in sidii ay Wasiirka xilka ka dagaya ula shaqeeyeen si la mid ah inay midka imaanayana ula shaqeyn doonaan.
Gudoomiyaha Gudiga Khayraadka ee Barlamaanka Xildhibaan C/qaadir Nuur Aadan ( Siisii) oo ka hadlay madasha ayaa guul u rajeeyay Wasiirka xilka ka dagaya isaga oo bogaadiyay waxqabadii uu ka sameeyay arrimaha macdanta iyo shidaalka Soomaaliya intii uu shaqada hayay. Xildhibaan Siisii wuxuu intaa ku daray in Wasiirka iyo kooxda la shaqeynaysayba ay ahaayeen dad muujiyay dhabar adeyg iyo hufnaan oo mar walba talo iyo fikriba ay kala qaadan jireen iyaga iyo Gudiga Khayraadka ee Barlamaanka.
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka oo dhowaan xilka wareejin doona Mudane Daa’uud Maxamed Cumar oo soo afjaray madashan lagu soo bandhigayay waxqabadka Wasaaradda ayaa u mahadceliyay khubaradii iyo shaqaalihii ay wada shaqeeyeen 12kii bilood ee la soo dhaafay. Waxa uu intaa raaciyay in uu ku kalsoonyahay khubarada iyo madaxda la wareegeysa xilka inay halkaa kasii wadi karaan dadaalkii uu u galay sidii Soomaaliya ula soo bixi lahayd saari shidaalkeeda sanadka 2020 si dalka faqriga iyo saboolnimada looga saaro.
“Waxaan aaminsanahay inaanu abuurnay wasaarad iyada iswadi karta oo haysata dhamaan aqoon iyo agab wixii looga baahnaa. Waxaan ka codsanayaa madaxda sare ee Dawladda inay ka warqabaan shaqaalaha Wasaaradda iyo khubaradeeda oo aanu ka keennay dibadda iyaga oo shirkado caalami ah hawlaha macdanta iyo shidaalka kala shaqeeya. Dadkaas waxaa loo baahanyahay in laga faa’iideysto.” Ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyay.
Madaxweyne Xasan oo baaritaan caafimaad ugu safray Jarmalka